चलचित्र ‘पुरानो बुलेट’को निर्माण घोषणा (फोटो तथा भिडियो सहित) – bisalchautari.com
चलचित्र ‘पुरानो बुलेट’को निर्माण घोषणा (फोटो तथा भिडियो सहित)
- ८ असार २०७५, शुक्रबार २१:१४ मा प्रकाशित
need to order viagara https://heystamford.com/writing/cost-help-homework-line-starting-up/8/ http://ww2.prescribewellness.com/onlinerx/long-can-effects-viagra-last/30/ https://caberfaepeaks.com/school/best-online-essay-writers/27/ essay scorer woodstock thesis theme social icons online sales viagra iene viagra generico pay to get top admission essay on civil war http://v-nep.org/classroom/essay-editing-service/04/ cbse sample papers class9maths 1st term watch free mortgage resume sample what should you do when writing an analytical essay https://psijax.edu/medicine/forum-cialis-effetti-collaterali/50/ watch source site life long essay definition medieval essay cutting classes thesis https://fotofest.org/solving/optimistic-essay-topics/5/ 2000 apush dbq essay what isacase study? source link my autumn holidays essay united states generic viagra are there any legit essay writing services professional admission essay ghostwriters sites for masters best viagra in the hyderabad market propecia kaufen economics homework help obtaining cialis without prtescription purano bullet nepali movie – anup bikram shahi, barsha siwakoti and mala limbu
काठमाडौं, २०७५ असाढ ८, शुक्रबार । क्रेजी इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा बन्ने चलचित्र ‘पुरानो बुलेट’ को औपचारिक निर्माण घोषणा गरिएको छ । काठामाडौमा एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी चलचित्रको निर्माण घोषणा गरिएको हो ।
यस चलचित्रमा चर्चित अभिनेता अनुप विक्रम शाही, अभिनेत्री द्वय वर्षा सिवाकोटी र माला लिम्बु प्रमुख भूमिका रहनेछन् । चलचित्रमा कविता आले, शिव मुखिया, कृष्ण भक्त महर्जन, शिरोमणी दवाडी, दिवज राई लगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहनेछ ।
१ करोड बढीको लागतमा निर्माण हुन लागेको चलचित्रलाई अशोक कुमार राई, दीपेन्ऽ लिम्बु, विरेन साम्बा र टिकाराम राईले संयूक्त रुपमा निर्माण गर्नेछन् । फिल्मको कार्यकारी निर्मातामा सन्तोष राई छन् ।
पत्रकारीतामा लामो समयदेखी काम गरिरहेका भिषण राईले यो चलचित्रबाट निर्देशनमा डेब्यु गरेका छन् । निर्देशक भिषण र कार्यकारी निर्मातामा सन्तोष सन्तोषको कथा–पटकथा रहेको छ ।
हरि घले लामाको छायांकन, उत्तम जंग लिम्बु र जयन जे. वाइवाको संगीत, राजेशपायल राई, मेलिना राई, जयन जे. वाइवा र उत्तम जंग लिम्बुको गायन रहनेछ । यस चलचित्रको कोरियोग्राफी प्रसान्त तामाङले गर्नेछन् ।
चलचित्रको छायांकन असार १५ गतेबाट सुरु हुने निर्माण टिमले बताएको छ । पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लाहरुमा ‘पुरानो बुलेट’ को छायांकन हुने निर्देशक भीषण राईले कार्यक्रममा जानकारी दिए । चलचित्रलाई आउादो मंसिरमा प्रदर्शनमा ल्याउने निर्माण टिमको तयारी रहेको छ ।
चलचित्र निर्माण घोषणा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी बनेका पुगेका चलचित्र विकाश वोर्डका पुर्व अध्यक्ष राजकुमार राई, निर्देशक मिलन चाम्स लगायतले चलचित्र टिमलाई बधाइ दिएका थिए ।